Nagarik News - भन्न खोजेको के?
भन्न खोजेको के?
विवाह नगरे पनि श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्वेता खड्का 'जोडी'कै रूपमा चिनिन्छन्। फिल्मदेखि व्यवसायसम्म सहकार्य गरिरहेका उनीहरूले सम्बन्धलाई औपचारिकता मात्रै दिन बाँकी रहेको बताइन्छ। शनिवार एक कार्यक्रममा यो जोडी सँगै देखियो। सँगै आए पनि गेटबाट आफ्नै ढंगले अघिपछि गरेर हिँडिरहेका थिए उनीहरू।
जब फोटोग्राफरले उनीहरूतिर लेन्स तेर्स्याएर फ्ल्यास झिलिकमिलिक पार्न थाले, श्वेताले हिँडाइको गति बढाएर श्रीकृष्णको बाहु पक्रिइन्। यस्तो गरेर श्वेताले भन्न खोजेकी के होलिन्? 'विवाह नगरे पनि नछुट्टिने जोडी हौँ' भन्ने त खोजेकी होइनन्, त्यहाँ लख काटिँदै थियो। सत्य कुरा त श्वेताबाहेक कसलाई थाहा हुन्छ र?
बुद्धको कथामा दीपा
लगातार फिल्म फ्लप हुन थालेपछि निर्देशक/निर्माताहरू निर्माणको विषयमा विविधता खोज्न थालेका छन्। यतिबेला डबिङ भइरहेको फिल्म 'दी रेन्ज' गौतम बुद्धको अलौकिक शक्तिमाथि बनाइएको छ। फिल्ममा साधारण मानिसलाई प्राप्त दैविक शक्तिको...
‘मेरी प्यारी पुनमकली'
मेरो घर नवलपरासीमा छ। एक्काइस वर्षको भएँ। दश कक्षा पढ्दापढ्दै माउतेको तालिम लिएँ। त्यसपछि पढाइ नै छाडेर माउतेको काम गर्न थालेँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हात्ती सफारी गराउने एक स्थानीय साहुले...
गालपारा माया भन्थे उहिले। अहिले माया ज्यानमारा पनि हुन थालेको छ। मिठा कुरा गर्दागर्दै प्रेमीले प्रेमिकाका कोखामा छुरा धस्छ। रोमान्स, देहसुख, विवाद अनि हत्या... एउटा डरलाग्दो चक्रमा फसेको छ प्रेम।...
गाउँदागाउँदै 'इमोसनल' भइन्छ
पन्ध्र वर्षको उमेरमै सोलो एल्बम 'परी' ल्याएर नेपाली संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी रजिना रिमाल अहिले पार्श्वगायिकाका रूपमा स्थापित छिन्। फिल्म र कलेक्सन एल्बममा गरी आठ सयभन्दा बढी गीत गाइसकेकी उनले...
स्टेज चढ्न चाहन्छ 'नेक्स्ट'
कुरा वर्षदिनअघिको हो। नेपाली संगीत क्षेत्रमा नयाँ ब्यान्ड थपिएको थियो। यही कुराको जनाउ दिन ब्यान्डले आफूहरूको नामै 'अर्को' अर्थात् 'नेक्स्ट' राख्यो। 'खुब नाम सोचियो त्यो बेला,' ब्यान्डका संस्थापक सदस्य सुशान्त...
केही साताअघि रिलिज भएको हिन्दी फिल्म 'नशा' धेरैलाई थाहा होला। फिल्म नहेरे पनि पुनम पाण्डेका हर्कत कसले बिर्सिनसक्छ र? तस्बिर हेरेपछि सबैलाई लाग्नसक्छ, यस्तो कहीँ देख्या हो। हो, त्यही फिल्मको...